अटोमोबाईल – BikashNews
‘होण्डा ह्विल अफ फरट्युन २’को विजेताले पाए एकदेखि १० लाखसम्मको नगद पुरस्कार
२०७४ मंसिर १८ गते १७:०३
काठमाडौं । नेपालका लागि होण्डा मोटरसाइकल तथा गाडीको अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रालिले दशैं तथा तिहार स्किम “होण्डा ह्विल अफ फरट्युन २” को विजेताहरु घोषणा गरेको छ । सोमबार सम्पन्न एक इभेन्टमा लक्की...
२०१७ मा नेपाल भित्रिएका उत्कृष्ट १० स्मार्टफोनहरु, मूल्य र फिचर सहित
२०७४ मंसिर १८ गते १६:२४
काठमाडौं । २०१७ को अन्त्य हुँदैछ । यो वर्ष नेपाली स्मार्टफोन बजारका लागि विशेष बनेको छ । सूचनाप्रविधीमा उत्साहपूर्ण मानिएको वर्ष २०१७ मा स्मार्टफोन तथा मोबाइलको राम्रो व्यापारसँगै नयाँ फिचरसहितका ब्राण्डेड स्मार्टफोनहरु यस वर्ष...
अग्निमोटो इन्कको ‘गस्टो आर एस’ स्कुटर नेपाली बजारमा, मूल्य १ लाख ६७ हजार पर्ने
२०७४ मंसिर ८ गते १३:१६
काठमाडौं । अग्नि ग्रुपको सहायक कम्पनी तथा महिन्द्रा टुह्विलरको आधिकारिक विक्रेता अग्निमोटो इन्कले नयाँ ‘गस्टो आर एस’ स्कुटर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यस स्कुटरको मूल्य नेपाली बजारमा १ लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ...
‘ग्राण्ड एक्सचेज मेला’ मंसिर ७ गते देखि ११ गतेसम्म आयोजना हुने
२०७४ मंसिर ६ गते १७:३९
काठमाडौं । पल्सर मोटरसाइकलको बजाज नेपालका लागि अधिकृत बितरक हंसराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले ‘ग्राण्ड एक्सचेज मेला’ आयोजना गर्ने भएको छ । ‘जिन्दगी बदलिन्छ बजाज एक्स्चेन्जसँग’ भन्ने मुलनाराका साथ काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा यहि...
टाटा मोटर्सकाे ‘एसयूभी टाटा हेक्जा’ नेपाली बजारमा, ११ जनालाई गाडी हस्तान्तरण
२०७४ मंसिर ६ गते १७:०६
काठमाडौं । टाटा मोटर्सले आफ्नो एसयूभी टाटा हेक्जा नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । बुधबार मात्रै भित्रिएको हेक्साको एक्स टी ४*४ का विभिन्न मोडलहरुको मूल्य ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पर्नेछ । नेपालमा हेक्साको बिक्री...
बजाजले ल्यायो “पेट्रोल बाहेक सबै खर्च हाम्रो” नामक योजना
२०७४ मंसिर ४ गते १३:२०
काठमाडौं । बजाज अटोको नेपालको लागि आधिकारिक वितरक हन्सराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीले “पेट्रोल बाहेक सबै खर्च हाम्रो” नामक ग्राहक योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत कुनै पनि बजाज डिस्कभर बाइकको खरिदमा खरिदकर्ताले...
अशोक लेल्याण्डका १० थान बसले अब चक्रपथ परिक्रमा गर्ने, आजैबाट सञ्चालनमा
२०७४ कार्तिक ३० गते १५:४३
काठमाडौं । आइएमई मोटर्स प्रालिद्धारा नेपाल अधिराज्यकालागि बिक्री वितरण गरिने अशोक लेल्याण्ड ब्राण्डका ३४ सिटे बसले अब चक्रपथ परिक्रमा गर्ने भएको छ । बुढानिलकण्ठ जमल सहिदगेट माइक्रोबस व्यवसायी समितीअन्तर्गतको बुढानिलकण्ठ यातायात प्रालीले अशोक लेल्याण्डका...
सिप्रदीलाई सुपर प्लाटीनम अवार्ड, वार्षिक ३५० मिलियन डलर राजश्वमा योगदान
२०७४ कार्तिक २९ गते २१:००
काठमाण्डौं । सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.ले आफ्नो व्यवसायिक मान्यता अनुसार विशिष्ट रुपमा त्यसको पालना गरेको र ग्राहकमुखी सेवाहरु प्रदान गरे बापत सुपर प्लाटीनम अवार्ड प्राप्त गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र अमेरिकामा प्रधान...
अग्नि मोटो इन्कको सर्भिस सल्लाह तथा प्राविधिक कार्यक्रम सम्पन्न, १९ जनाले लिए प्रशिक्षण
२०७४ कार्तिक २९ गते १८:०२
काठमाडौं । अग्नि ग्रुपअन्तर्गतको अग्नि मोटो इन्क प्रालिको सर्भिस सल्लाह तथा प्राविधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म आयोजना भएको कार्यक्रममा देशभरका १९ जना प्राविधिकहरु सहभागी भएका थिए । महिन्द्र टु ह्वीलरहरुको विक्रीवितरण गर्दै...
गाडी धुने पूर्ण स्वचालित प्रविधि नेपाली बजारमा, ५ मिनेटमै एउटा गाडी धोइसक्ने
२०७४ कार्तिक २८ गते १५:१४
ललितपुर । उमी ग्रुपले पहिलो पटक जर्मन टेक्नोलोजिको गाडी धुने पूर्णस्वचालित प्रविधि नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच गैर आवासिय नेपाली संघका उपाध्यक्ष सविला राजभण्डारी र उद्योगी समाजसेवी राजेन्दराज खेतानले उक्त...
हुन्डाईले नेपाली बजारमा ल्यायो नयाँ कार ‘द नेक्स्ट जेन भर्ना’, मूल्य ४७ लाख रुपैयाँसम्ममा
२०७४ कार्तिक २७ गते १८:५७
काठमाडौं । लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रालीले हुन्डाईको ‘द नेक्स्ट जेन भर्ना’ कार नेपाली बजारमा ल्याएको छ । सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कम्पनीले भर्नाको ५ औँ जेनेरेसनको सेडान कार सार्वजनिक गरेको हो । ६ वटा...
हिरोको चौंथो र पाँचौं विजेताको नाम घोषित, दुबैले जिते १/१ लाख रुपैयाँ नगद
२०७४ कार्तिक १९ गते १७:२६
काठमाडौं । नेपालको लागि हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङ्ग प्रा.ली.ले आफ्नो योजना अन्तर्गतको चौंथो र पाँचौं विजेताको नाम घोषित गरेको छ । कम्पनीकाे गत दशै र तिहारको उपलक्ष्यमा “यो दशै र तिहारमा...
गाडी बिग्रेर टेन्सनमा हुनुहुन्छ? टेन्सन नलिनुस् अब एक कल मै आइपुग्छ मर्मत टोली
२०७४ कार्तिक १५ गते १७:२८
काठमाडौं । के तपाई गाडी बिग्रेर टेन्सनमा हुनुहुन्छ? टेन्सन नलिनुस् अब एक कलमै गाडी मर्मत टोली गाडी बिग्रेकै स्थानमा आइपुग्ने छन् । अग्नि ग्रुप प्रालिको आधिकारिक सर्भिस सेन्टर बालाजु अटोवक्स् प्रालिले हालै महिन्द्रा गाडीहरुको...
सुजुकी मोटरसाइकलको नयाँ शोरुम पोखरामा
२०७४ कार्तिक १० गते १६:१९
काठमाडौं । नेपालका लागि आधिकारीक आयातकर्ता भिजी अटोमोवाइल्सको पोखरा क्षेत्रको लागि आधिकारीक विक्रेता हिमालय अटो वर्ल्डले पोखरामा नयाँ शोरुमको शुभारम्भ गरेको छ । उक्त शोरुमको उद्घाटन व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य संघ पोखराका अध्यक्ष विश्वशंकर...
जाडोमा मोटरसाइकल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी गर्नुस् सुरक्षित बाइक राइडिङ
२०७४ कार्तिक १० गते ७:०३
काठमाडाैं । जाडो मौसममा चिसो हावा चल्ने भएकाले मोटरसाइकल चलाउदा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी गर्ने चालकले शरीरको साथै मोटरसाइकलको पनि निकै हेरचाह गर्नुपर्छ । जाडोमा हावाले पानी चाँडै सोस्ने भएकोले मोटरसाइकलमा धुलो...
हुण्डाईको नयाँ थ्रीएस सेन्टर अब जनकपुरमा
२०७४ असोज ३० गते १७:४३
काठमाडौं । नेपालका लागि हुण्डाई गाडिको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले जनकपुर स्थित आफ्नो डिलर ओम अटोमोबाइल्सको संयोजकत्वमा नयाँ थ्रीएस सेन्टर उदघाटन गरेको छ । एकै छानामा सेल्स, सर्भिस र स्पेर पार्ट्सको सुविधा प्रदान...
‘फियाट पुन्टो इभो प्योर’ कार नेपाली बजारमा, मूल्य २६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ
२०७४ असोज २९ गते १६:१८
काठमाडौं । नेपालका लागि विश्वकै सातौं ठूलो अटो निर्माता कम्पनी फियाट् क्रिस्लर अटोमोबाइलको आधिकारिक विक्रेता लाइफ अटोमोबाइलले नयाँ फियाट पुन्टो इभो प्योर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । पुन्टो प्योरलाई प्रतिस्थापन गरेर फियाट पुन्टो इभो...
काठमाडौं महानगरले सवारी करको दर चार गुणासम्म बढायो, कुन सवारीले कति तिर्नुपर्छ ?
२०७४ असोज २३ गते १८:३७
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष सवारी करको दररेट चार गुणासम्मले बढाएको छ । महानगरपालिका भित्र ठेगाना रहने गरि दर्ता भएका तथा सो क्षेत्रभित्र चल्ने सवारी साधनको करको दररेट बढाइएको छ । काठमाडौं नगरसभाबाट...
फुटबल स्टार रोनाल्डो चढ्छन् ३० करोड रुपैयाँ पर्ने ‘बुगाटी काइरन’, यस्तो छ फिचर्स
२०७४ असोज २० गते ११:१६
लण्डन । खेल जगतका सूपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफूलाई सुहाँउदो सूपरकार किनेका छ्न् ।महंगा कारका शौखिन ‘फुटबलस्टार’ क्रिस्टियानो रोनाल्डोले शानदार कार ‘बुगाटी काइरन’ किनेका हुन् । यो कारको मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ (२१ लाख...
कम्पनीको क्षमता बढाउन फोर्डको नयाँ रणनीति, १४ अर्ब डलर खर्च कटौती गर्ने
२०७४ असोज २० गते ७:१०
बिबिसी, न्युयोर्क । अमेरिकाको बहुराष्ट्रिय गाडी निर्माण कम्पनी फोर्ड मोटर्सले खर्च कटौती गरेर कम्पनीको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । फोर्डका सञ्चालक जीम ह्याकेटले कम्पनीलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन १४ अर्ब डलर खर्च कटौतीको...
« अघिल्ला 1 … 29 30 31 32 33 … 42 पछिल्ला »